Pavel Slobodkin Centre: endaweni isiko okwakhayo eMoscow
Pavel Slobodkin Centre wabonakala iminyaka engu-15 edlule, futhi ekupheleni saleli shumi lokugcina leminyaka, wayebe odumile kungasho neze kuphela inhloko-dolobha yaseRussia, kodwa futhi ezweni lonke. Musical futhi waseshashalazini Uhlelo ejensi eyenzelwe izethameli mass kakhulu, kanye nemicimbi ekhethekile zemfundo ukusiza abalaleli nezibukeli ukuqonda kangcono yobuciko. Sekuyisikhathi eside Isayithi kwaba idolobhakazi isiko pearl futhi zingabhekwa kufanele kubhekwe omunye the best in Russia.
UMdali yaseshashalazini kanye ekhonsathini isikhungo
Umuntu owasungula le isikhungo kwamasiko, elise eMoscow, waba Umculi Yabantu Russia Pavel Slobodkin.
Umqambi wezingoma odumile, edlala nopiyano, wazalelwa emndenini zomculo Meyi 9, 1945. Slobodkin kwasebuntwaneni emsebenzini zokudala. Impumelelo yokuqala enkulu beza kuye maphakathi nawo-1960, lapho afike wasungula khona iSikhungo vocal-wezinsimbi Ensemble "Fellows Jolly". Ithimba waba omunye ethandwa kakhulu kuleli zwe ngisho waziwa ngaphandle kweSoviet Union.
kamuva Slobodkin wahlangana Ingxubevange Pugachevoy, osanda waqala umsebenzi wakhe, futhi wammemela "Fellows Jolly". Wabuye badlala band eYurophu nase iqhaza ekulungiseleleni amakhonsathi njengengxenye Olympics eMoscow lo 1980. Ngemva kwamashumi eminyaka i-career umlingisi yimpumelelo waqala ukudala yaseshashalazini kanye ekhonsathini kwehholo lakhe. Lomlomo waso grand zenzeka ekuqaleni kuka-2002. Kuyinto kusukela kulesi sikhathi, kukhona inkanyezi entsha kumephu yamasiko eMoscow.
Umlando Pavel Slobodkin Centre
Ngo-2003, umdwebi wasebenza UProfesa leonid Nikolaev wadala orchestra ekamelweni. Lalihlanganisa abaculi abasha, abawinile imiklomelo ehlukahlukene international ngisho iqhaza kule lomculo wezinsimbi we Bolshoi Theatre. Slobodkin Chamber Orchestra isibe omunye imichilo edume kakhulu yenhloko-dolobha. Awakhulume izinkanyezi zomhlaba umculo yesehlakalo, kuhlanganise Dmitri Hvorostovsky, Irinoy Shnitke, Graf Murzha futhi amanye amakhosi.
Orchestra wazenzela igama endaweni wadala Slobodkin. Ngesikhathi izenzakalo ebibanjelwe esikhungweni, kwakunokwenzeka ukuhlangabezana abaculi edumile emhlabeni wonke. Imicimbi ukuwo Igor Butman, Terri Lang, uNicholas Karachentsov, Daniel Kramer, nezinye osaziwayo. izivakashi eziningi ayegubha kakhulu umsindo ka ekhonsathini ihholo futhi ingaphakathi zikanokusho, okusenza charm kanye ehlukile. Lena ngempela omunye izikhungo ayetholakala kwamasiko enhloko-dolobha yaseRussia.
Theatre Centre pavla Slobodkina manje!
Imigomo, okuyinto Itholakala Arbat, eside babemthanda, ngokungagcini nje ngokubashumayeza abathandi ubuciko bendawo, kodwa futhi izimenywa eMoscow. Nge-Pavel Slobodkin Centre esiteji ungezwakala imisebenzi ehlukene ngokuphelele, kuhlanganise imisebenzi edume kunazo bomculo ziyaphawuleka, yobuciko ezingavamile ukuthi kuyaqabukela wezwa eRussia, ngisho nezinhlelo ezikhethekile abalaleli omncane. Slobodkin isikhungo zizokhanga zonke izethameli, ngoba wonke umuntu angakwazi ukuthola umcimbi ekahle poster. Futhi lokhu enkantolo edumile, uzama ukuba kukhawulwe ngokwami noma izilaleli.
Ngaphezu kwalokho, eshashalazini izinhlelo zemfundo ukuthi wenze umnikelo obalulekile imfundo zomculo zabantu enhlokodolobha. Yezefundo yaziwa nangokuthi isikhala waseshashalazini, lapho ungabona idrama amapharele. Lena indawo eyingqayizivele ngempela, ukwakha isizinda yamasiko eMoscow. Ngaphezu kwalokho, isikhungo akuyona kuphela efundisa, kodwa futhi uyazondla: kuyinto lezitsha ukuthi ziyojabula amanani ezingabizi phezu isitezi saleso sakhiwo lesibili. Ngakho lapha ungakwazi ukuchitha isikhathi sakho ukhululekile ngempela.
Ikheli noxhumana nabo
Slobodkin Centre itholakala endlini №48 ku emgwaqweni Arbat. Vele ukuphila kube uhambo olufushane kude kuyinto metro station "Smolenskaya" bese uyagijima Garden Ring. Lokhu kusiza umzila akusebenzi nje kuphela kubantu abasebenzisa izithuthi zomphakathi, kodwa futhi abahamba ngezimoto.
amahhovisi amathikithi nsuku zonke evulekile kusukela 10 am kuya 20:00. Izivakashi ziyakwazi ukubona ukukhokha ukheshi kanye yasebhange amakhadi.
Noma ungaxhumana isikhungo ngabasebenzi yefoni ahlelwe kuwebhusayithi nemaphosta imisebenzi isikhungo.
Ngaphezu kwalokho, le nkinga e-mail kungenziwa isethwe. Ngezinye mtcc@yandex.ru impendulo kunoma isiphi isihloko, futhi concert@center-slobodkina.ru - kuphela izincwadi ezihlobene ngokubambisana neNhlangano MTKTS Pavel Slobodkin.
Voronezh, Youth House: ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Siyini "24/7" nalapho benza leli gama?
"Nakuba isibalo sabantwana umbala Teshi": Inani phraseologism futhi izibonelo zokusetshenziswa
Patrick Süskind: Umbhali biography
Unkulunkulukazi wenzalo e izinganekwane zamazwe ahlukahlukene
Kuyini Santa Claus futhi ingabe uhlala kuphi?
Lo rise Islam - kwezimbangela kanye nomlando
Zokupheka boMdabu kwesisindo: elula, ephephile, ngempumelelo!
Indlela ukwandisa ukuzethemba kanye ukuzethemba
Yini kugcinwa emphemeni ebusika futhi kanjani?
Imikhiqizo Pandect. Uphenyo Pandect X-1100, Pandect X-2000, X-2010, X-2050, IS-650, IS-670, IS-350i
Ukususwa kwezimiso izinwele ebusweni
UkuQothulwa Kwesizwe Kwezingane yibugebengu obubi kunazo zonke ngokumelene nomuntu
Amathiphu zendlela uthole sezindiza Domodedovo
Lokho zifanekisela ifulege futhi elingenamikhono izingalo of China? Yini indaba yabo?